ukhona lapha: Ikhaya amathiphu Indlela ukuqasha lodgers efulethini
Lapho umnikazi wendawo anezinye endaweni khulula, ke manje noma ngokuhamba kwesikhathi uqala ukucabanga mayelana, ukuthola kusukela iholo lakhe yokwenziwa. Kulokhu, awukwazi kuphela ukwenza inzuzo, kodwa namanje ukunikeza ukunakekelwa ingane izindlu, kuzoba usesimweni efanelekayo yokuhlala unomphela.
isiphetho esibalulekile yesivumelwano nge abalimi esikhathini esizayo. Kungaba angakwenza ngomlomo, futhi semthethweni. Esimweni sokuqala, wena umane uyavuma ukuthi, lapho ukukhokhelwa zizokwenziwa futhi kulokho lemali. Endabeni isiphetho ebhaliwe inkontileka, ekhethekile eqinisekisiwe ngumuntu ummeli olungisa izivumelwano, uzoba ukukhokha izintela engenayo phezu engenayo kuwe. Ngayinye yalezi ongakhetha kunezimo zabo kanye nebubi.
Indlela ukunquma inani yokukhokha
Kube nenkinga okubalulekile ukuze kutholakale izinga yokukhokha, ngoba uma intengo ngeke eliphezulu kakhulu kube, ke uzimisele kuyoba nzima kakhulu ukuthola, futhi uma ongaphakeme – ke sixoxe ngabanye inzuzo enhle akudingekile. Ukuze sithole intengo elilungile, nje ukuya inthanethi thematic, Ngokwesibonelo, onriélt.ru, emva ufaka izilungiselelo zakho, ungabona eziningi izikhangiso ekhombisa izindleko ezinsizakalweni ezifana. Futhi uzokwazi ukwengeza lapha isikhangiso sabo.
Inani kuthinta izinto ezimbalwa, lena indawo impahla, ukuthuthukiswa kwengqalasizinda, khona eziningi izinkulisa, esikoleni, polyclinic, nezitolo ezinkulu, emakethe, njll. Omakhelwane futhi zidlala indima ebalulekile, uma enobudlova kakhulu, ngokuvamile ubambe ngasekupheleni ebusuku amaqembu, akunakwenzeka ukuthi kukhona umuntu ongafuna ukuba siphile esimweni esinjalo,, ikakhulukazi imindeni enezingane ezincane noma abantu, ngubani sivuke emsebenzini.
Indlela ukucinga abaqashile
Uma ufuna kudlule masinyane efulethini lakhe, ke ungaxhumana ejensi ingcebo, sebenalo base ikhasimende, ngoba ngezinye izikhathi uthola efanelekayo candidacy, bazokwazi ukuthi cishe ngosuku ukwelashwa kwakho. Yini embi ngalo iyona isidingo ukukhokhela izinsizakalo realtors.
Kuyinto ishibhile nosesho ezimele, ukhetho best yayiyobizwa ngokufaka izikhangiso umyalezo amabhodi ezihlukahlukene, izinkundla kanye nezinye izinsiza baqonde izinto ezenzekayo. Ungakhohlwa ngesidingo ukulungiselela kahle isikhangiso, futhi qiniseka ukwenza okuningi ngangokunokwenzeka izithombe kungenzeka. Isithombe kufanele sibe akukho izinto ezingadingekile, okubizwa ngokuthi udoti, efulethini kufanele abe ngendlela ehloniphekile, ukudala umuzwa wenduduzo. Mhlawumbe, amafasitela uyokuma izitshalo potted, nendwangu esetshenziswa amahle. On ifenisha scuffs bavunyelwe akukho, izindawo, Konke lokhu ngeke nje okwesabisa away abaqashi bakho abanamandla.